स्न्यापड्रागन पावर र ६००० एमएएच ब्याट्रीका साथ रेडमी १० नेपाली बजारमा - सुनाखरी न्युज
Posted on: May 27, 2022 - 11:00 am
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । ग्लोबल टेक्नोलोजी लिडर शाओमीले रेडमी १० नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ। स्मार्टफोनको बजारमा हुने चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सस्तो दरमा उत्कृष्ट उत्पादन ल्याउने लक्ष्यका साथ शाओमीले रेडमी १० लन्च गरेको हो।
लन्चको बारेमा बोल्दै शाओमी नेपालका कन्ट्री जेनेरल म्यानेजर अमितकुमार पंडाले भने, ‘हाम्रो लागि उपभोक्ता नै हाम्रो केन्द्रबिन्दु हो जसले गर्दा हामीलाई शाओमीले प्रयोग गर्ने टेक्नोलोजी सबैका लागि पहुँच योग्य बनाउन प्रेरित गर्दछ। कम बजेटमा राम्रो परफमेन्स खोज्नेहरुका लागि रेडमी १० सबै भन्दा उत्कृष्ट उत्पादन हो। रेडमीको यो उपकरणमा फ्ल्यागशिप उपकरणहरूमा पाइने स्न्यापड्रागन ६८० र ६एनएम प्रोसेसरहरु रहेको छ। अग्रणी वर्गको प्रोसेसर, स्न्यापड्रागन ६८० र ६००० एमएएचको ब्याट्रीले उपभोक्तालाई ढिलाइ मुक्त र सहज अनुभव सुनिश्चित गर्नुका साथै १७.०४ सीएम (९६.७१“) डिस्प्ले र ५०एमपी डुअल क्यामेरा भएको यो रेडमी १० ले आरामदायी दृश्य अनुभव प्रदान गर्दछ।’
नयाँ रेडमी १० को पछाडि जडान गरिएको ठूलो क्यामेराको साथमा फिंगरप्रिन्ट स्क्यान गर्ने स्पेस सबैभन्दा आकर्षक विशेषता रहेको छ। १.१३ एमएम मोटाइ र २०३ ग्राम वजन भएको यो फोन १७.०४ सीएम (६.७१“) डिस्प्लेको साथ तपाइँका लागि उत्तम उत्पादन हुन सक्छ।
बजेटको आधारमा लोकप्रिय स्न्यापड्रागन ६८० चिपसेट कार्यसम्पादनमा कुनै सम्झौता नगरी प्रयोगकर्ताहरूको उत्पादकता बढाउन समर्पित छ। एन्ड्रोइड ११ मा आधारित एमआईयूआई १३ सफ्टवेयर भएको रेडमी १० मा ६जीबीसम्मको र्याम र १२८जीबी आन्तरिक स्टोरेज रहेको छ जुन प्रयोगकर्ताको उत्पादकता बढाउन समर्पित छ।
अप्टिक्सको सन्दर्भमा रेडमी १० मा कुल तीन सेन्सरहरू छन्। पछाडिको डुअल क्यामेरा सेटअपमा ५० एमपी प्राइमरी शूटर र २ एमपी डेप्थ क्यामेरा समावेश छ भने सेल्फी र भिडियो कलहरूको लागि ५एमपी क्यामेरा समावेश गरिएको छ। यो रेडमी १० मा रियर र फ्रन्ट क्यामेरा दुवैबाट ३०एफपीएस मा १०८०पी भिडियो खिच्न सकिन्छ।
डुअल–ब्यान्ड वाइफाइ र ब्लुटुथ ५.० समर्थन गर्ने, डाउन–फायरिङ स्पिकर र ३.५ एमएम हेडफोन ज्याकका साथ यस रेडमी १० मा प्रयोगकर्ताले ५१२जीबीसम्मको माइक्रो एसडी कार्ड विस्तार गर्न सक्छन्।
नेपालमा रेडमी १० को मूल्य र उपलब्धता
रेडमी १० नेपाली बजारमा मिडनाइट बल्याक, पसिफिक ब्लु, करेबेयन ग्रीन मा उपलब्ध छ।
नेपालमा रेडमी १० ४/६४ जीबी संस्करणको मूल्य रु. १८ हजार ९९९ छ।
त्यस्तै हाई–एन्ड ६/१२८ जीबी संस्करणको मूल्य रु. २१ हजार ९९९ रहेको छ।
रेडमी १० को यो फोन नेपालभर आधिकारिक मी स्टोरहरुमा उपलब्ध छ।